Abafundisi be-Intanethi - njani umntu abe ilungu lecawa likaKristu?
Ngosindiso lomphefumlo womntu kukho iindawo ze-2 eziyimfuneko: inxalenye kaThixo nenxalenye yomntu. Inxalenye kaThixo inxalenye enkulu, "Ngokuba ngobabalo nisindiswa ngokholo, kwaye kungengoko kwenu, sisipho kuThixo, kungekhona ngemisebenzi, ukuba kungabikho mntu uzukisa" (Efese 2: 8-9). Uthando uThixo aluvelayo kumntu lwamholela ukuba athumele uKristu ehlabathini ukukhulula umntu. Ubomi kunye nokufundisa kukaYesu, umbingelelo esiphambanweni, kunye nokuvakalisa iindaba ezilungileyo kubantu kubandakanya inxalenye kaThixo ekusindisweni.
Nangona inxalenye kaThixo yinxalenye enkulu, inxalenye yomntu nayo iyimfuneko ukuba umntu afikelele ezulwini. Umntu kufuneka ahambisane nemimiselo yokuxolelwa yintoni iNkosi eyamemezele yona. Inxalenye yomntu inokucaciswa ngokucacileyo kumanyathelo alandelayo:
Yiva iVangeli. Baya kubiza njani abo abangakholwayo, bayakholwa njani na abangabavayo na? Baya kuva njani ngaphandle komshumayeli? (AmaRoma 10: 14).
Kholelwa. "Ke ngaphandle kokholo akunakwenzeka ukumkholisa kuye, ngokuba lowo ufikela kuThixo kufuneka akholelwe ukuba unguye, nokuba ungumvuzi wabamfunayo" (Hebhere 11: 6).
Phenduka izono ezidlulileyo. "Ngako oko amaxesha okungazi uThixo akayekeleni, kodwa ngoku uyalela abantu ukuba yonke indawo baphenduke" (IZenzo 17: 30).
Ndivuma ukuba uYesu uyiNkosi. Uthi uFilipu wathi, Ukuba ukholelwa ngentliziyo yakho yonke, uya kuyenza. "Waphendula wathi:" Ndiyakholwa ukuba uYesu Kristu unguNyana kaThixo "(IZenzo 8: 36 -37).
Ubhaptizwe ngenxa yokuxolelwa kwezono. "Wathi uPetros kubo, Phendukani, nibhaptizwe elowo kuni egameni likaYesu Kristu ukuxolelwa kwezono zenu, nize niwamukele isipho soMoya oyiNgcwele" (IZenzo 2: 38).
Phila ubomi bobuKristu. "Nina niyintlanga ekhethiweyo, ubukumkani bobukumkani, isizwe esingcwele, abantu belifa lakwaThixo, ukuze nibonakalise ubugqwetha obakubizayo bephuma ebumnyameni baye ekukhanyeni kwakhe okumangalisayo" (1 Peter 2: 9).